ဘဲပေါင်း ဆီချက် ခေါက်ဆွဲ | Wutyee Food House
ဘဲပေါင်း ဆီချက် ခေါက်ဆွဲ
ဘဲပေါင်း ဆီချက် ခေါက်ဆွဲ (၄ယောက်စာ)
မနက်စာ၊ နေ့လည်စာ အစာပြေအဖြစ် လုပ်စားနိုင်အောင် ဘဲပေါင်း ဆီချက်ခေါက်ဆွဲလေးပါ။ ဘဲသားကို နူးအိအောင် ၀တ်ရည်ကတော့ အရင်ဆုံး ဆန်ဝိုင်၊ တရုတ်ဟင်းခတ်တွေနဲ့ နုပ်ပြီမှ pressure cooker နဲ့ပေါင်းထားပါတယ်။ ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ အအီပြေ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီးဆော့ချဉ်လေးနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ တူတူချက်ကြည့်ရအောင်…
၁။ ဘဲပေါင်ရင်သား – ၄၀ကျပ်သား (သန့်စင်ပြီးသား)
၂။ တရုတ်မာဆလာ – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၃။ သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၄။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၅။ ပဲငံပြာရည် (အနောက်) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၆။ ပဲငံပြာရည် (အကြည်) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ရ။ ဗီနီကာ – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၈။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၄မွှာ (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
၉။ ဂျင်း – လက်တဆစ် (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
၁၀။ ဆန်ဝိုင် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ ခေါက်ဆွဲပြား – ၁၅ကျပ်သား
၂။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၂စည်း (ပါးပါးလှီးပါ)
၃။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၆မွှာ (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပြီ ဆီချက်ချက်ထားပေးပါ)
၁။ ခွက်တစ်ခုထဲတွင် ဘဲသားကို ထည့်ပြီ ဆူး(သို့)ခရင်းဖြင့် ထိုးပေးပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ဘဲသားနုပ်ရာတွင် အသားထဲတွင် စိမ့်ဝင်ရန် ခရင်းဖြင့် ထိုးခြင်းဖြစ်သည်။
၂။ ပြီမှ ဘဲပေါင်းအတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော (တရုတ်မာဆလာ၊ သကြား၊ ဆား၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဗီနီကာ၊ ဆန်ဝိုင်)အားလုံးဖြင့် ရောနုယ်ပြီ ၁နာရီခန့်နုပ်ထားပေးပါ။
၃။ နုပ်ပြီလျှင် ပေါင်းအိုး Pressure Cooker ထဲသို့ နုပ်ထားသော ဘဲသား နှင့် ရေ(၃ခွက်)ကို ထည့်ကာ အဖုံးအုပ်ပြီ မိနစ် ၃၀ခန့် ပေါင်းပေးပါ။
၄။ နူးအိသော ဘဲပေါင်းရပြီဆိုလျှင် ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ တစ်ပွဲစာ ပြင်ပါတော့မည်။
၅။ ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲသို့ ခေါက်ဆွဲဖတ်(တယောက်စာ)၊ ကြက်သွန်ဖြူကြော်၊ ဆီချက် (စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း)၊ ကြက်သွန်မြိတ် (အနည်းငယ်)၊ ပဲငံပြာရည် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်) ဖြင့် တပွဲစာ ပြင်လိုက်ပါ။
၆။ ပြီမှ အပေါ်မှ ဘဲပေါင်းတင်ကာ ဘဲပေါင်း ဆီချက်ခေါက်ဆွဲကို အချဉ်ဖြင့် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
မှတ်ချက် ။ ။ ဆီချက်ခေါက်ဆွဲနှင့် တွဲစားရန် အချဉ်အတွက် (ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်နီ(၂လုံး)၊ ငရုတ်သီးဆော့ (စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း)) တို့ကို ခွက်တစ်ခုထဲ ရောနယ်ပေးပါ။
Category: တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ |
Mon Mon Aung says:
စားချင်စရာလေး ၀တ်ရည်ရေ … ဘဲပေါင်းဆီချက် အရမ်းကြိုက်တယ် … ခုတော့ လုပ်နည်း သိသွားလို့ ကြိုးစားကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော် … နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းပါစေလို့ … :))
Thanksalot par.. Plz try it Ma Mon! 🙂
Nang Nanda Aung says:
ဟင်းချက်တဲ့ နေရာမှာ သုံးတဲ့ တရုတ် ဆန်ဝိုင်ကို ပြောတာပါ။ Rice Wine = ဆန်ဝိုင်လို့ supermarket တွေမှာမေးဝယ်လို့ရပါတယ်
ဘဲသားကို အပိုင်းလိုက်လေးတွေလုပ်ထားတာ တစ်ခါတစ်လေတော့တွေ့တယ်..
Thanks Ma Khin Ya Mone! 🙂
awww sar chin like tar…kha lar tone ka top lote ma kyayye buu pig yee sote.. heee
haaa ခုမှ စမ်းလုပ်ကြည့်တာ။ ကောင်းသား.. 🙂
စားချင်စဖွယ်ပါလား ဝတ်ရည်ရေ။ နည်းလေးလည်း အသေအချာ မှတ်သွားပြီ။ ကျေးဇူးနော်။
ဘဲသားက ပိုကောင်းပေမဲ့ ဈေးကြီးတယ်ဗျ-ကြက်သားနဲ့ပဲလုပ်စားဖြစ်တယ်-ကျေးဇူးပါဗျာ
ကြက်သားနဲ့လည်း စားကောင်းပါတယ်… 🙂
ma wutyee , what is the chinese masala ? please let me see simple bag and brand ? thank you .
တရုတ်မာဆလာ = Chinese Five- Spices Powder.. နောက်နေ့မှပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီ တင်ပေးလိုက်မယ်နော်.. ကျေးဇူး
Sar Par Shin! 🙂
Can we cook it without the Rice Wine?
Yeah U can cook!! 🙂
Thank ma wutyee I will try it soon.
Plz try it sis
thwel thwel tun says:
Ok I will sis! 🙂
Ninth Aye Pyae OO says:
အစ်မ ရေသုံးခွက်ဆိုတာ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာလဲအစ်မ
ချိန်တဲ့ ခွက်ကို လင့်နဲ့ တစ်ခါထဲ ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ညီမ။ http://www.examiner.com/images/blog/EXID24429/images/measuringcup.jpg
moon poni says:
ဒီကနေ့ လုပ်စားဖြစ်တယ်၊ အလွန်အ၇သာ၇ှိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
Glad to hear sis.. I will post later. 🙂
ဖြူsays:
အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အသစ်တင်တိုင်း
Wutyee Food House » Wutyee Food House Cooking Book says:
[…] တို့ဟူးနွေး (၃ယောက်စာ) […]
MARGARET S KAMDAR says:
I amagourmet chef finishingaauthentic burmese cookbook. I have never heard of serving mohingar with mint leaves. Coriander.cilantro yes but not mint, That is not authentic burmese food.
Mohingar is many different kind of cooking method in Myanmar. My mom cames from Southern Myanmar(Myeik). For Myeik Mohingar, we add corainder leaves, mint, long-bean andalot of banana stem. But for Yangon Mohingar, we add only corainder leaves, not mint in Yangon Monhingar… You will suprise about some people add rice in Monhingar… 🙂
I amagourmet chef finishing an authentic burmese cookbook. I have never heard of serving mohingar with mint leaves. Coriander.cilantro yes but not mint, That is not authentic burmese food.
အမျိုးမျိုးလုပ့်ကြည့်သာနေတယ် ၁၉လမ်း ဆီချက်တို့
I will try to post later bro 🙂
salai thang te says:
innn စားလို့တော်ေ်ကောင်းတယ် မေမေလုပ်ခိုင်းတာလေ
ကျေးကျေးပါအမ 🙂 😀
Sitt Naing says:
I will try to cook it one day. Thanksalot Sis.
အမ တရုတ်မဆလာ က ဘယ်လို ပြောဝယ်ရမလဲ English အခေါ်အဝေါ်ရှိပါသလားခင်ဗျာ